» ‘नेपाली कथा र समय चेतना’ विषयमा गोष्ठी, कथाको पठन नभएको भनाई
‘नेपाली कथा र समय चेतना’ विषयमा गोष्ठी, कथाको पठन नभएको भनाई
२०७४, २८ पुष शुक्रबार ०८:३२
हेटौँडा, २८ पुस । प्रगतिशील लेखक संघ मकवानपुर र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बिहीबार हेटौँडामा ‘नेपाली कथा र समय चेतना’ विषयमा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान आख्यान विभागको प्रमुख मातृका पोख्रेलको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा समीक्षक, पत्रकार तथा कथाकार अभय श्रेष्ठले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि पोख्रेलले नेपालमा पछिल्लो समय कथाको पठन नभएको कुरा बताए । कार्यक्रममा विभिन्न समयमा साहित्यकारहरुले आफ्नो रचना र कृति मार्फत पु¥याएको योगदान र कृतिहरुको बारेमा अवधारणा पत्र मार्फत चर्चा गरिएको थियो । परिवर्तित कालखण्डमा नेपाली साहित्यकारहरुले मात्र नभएर विश्वका साहित्यकारहरुले आफ्नो युगको चेतना आफ्ना सिर्जना मार्फत बोलेको विषयमा कार्यक्रममा चर्चा गरिएको थियो ।
त्यस्तै नेपाली कथामा तत् समयको स्वर कसरी अभिव्यक्त भएको छ ? भन्ने कुराको विश्लेषण कुन समयमा के कस्ता कथाहरु आएका छन् भन्ने कुराहरुको बिस्तृत जानकारी समेत दिइएको थियो । कार्यक्रममा प्रलेसका उपाध्यक्ष सियम रिमालले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए ।
प्रगतिशील लेखक संघ मकवानपुरका अध्यक्ष पुरुषोत्तम आचार्यको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा कथाकारहरु अरुण खतिवडा, नवराज शर्मा, प्रलेस संस्थापक अध्यक्ष सम्राट तुम्बाहाङफे, साहित्यकारहरु देवराज तिवारी, दिपक गौतम, रमेश मोहन अधिकारी, सानुभाइ विश्वकर्मा, अप्सरा तिमल्सिना लगायतकाले साहित्यकार अभय श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको अवधारणा पत्र माथि टिप्पणी गरेका थिए ।
कार्यक्रममा अतिथिहरु प्रलेस मकवानपुरका सल्लाहकारहरु कौशल पाण्डे, उमाकान्ता आचार्य, माओवादी केन्द्र मकवानपुरका प्रचार विभाग प्रमुख कमान सिं पाख्रिन(पृथक), साहित्यकार आर.सि. रिजाल, साहित्य संगमका उपाध्यक्ष अनिता न्यौपाने, आँचल साहित्य कला पुञ्जका अध्यक्ष अप्सरा तिमल्सिना, तुल्सी थापा, लगायतको सहभागीता रहेको थियो । साथै कवि युद्ध प्रसाद मिश्रको जन्मजयन्तीको अवसर पनि परेकोले उनप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गरिएको थियो ।